ज्योति मगर भन्छिन् – अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो ! – Koshidaily
ज्योति मगर भन्छिन् – अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो !
access_alarms Koshi daily २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०३:००	chat_bubble_outline 0	Comments
– अहिलेको मेरो बुझाइ लोकदोहोरी क्षेत्र एकदमै धनी रहेछ । यसका लागि अहिले ८–१० लाखसम्म खर्च गरेर भिडियो बनाइरहेका छन् । अर्काे कुरो यसले कलाक्षेत्रका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसलाई यतिबेला पालेको छ । हिजो चलचित्र गरेर ठीकै आम्दानी गर्ने कलाकारहरु अहिले भिडियो अभिनय गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । घर गाडी जोडेका छन्, सम्पन्न भएर हिँडेका छन् । लोकदोहोरी क्षेत्रको मानिसको मनपनि ठुलो छ । फाइदा नहेरेर पनि यो क्षेत्रकालगातार काम गरिरहेका छन्
-यो अन्तरवार्ता कुबेर गिरीले रातोपाटी डट कमका लागि लिनु भएको हो ।
प्रचण्डले दर्ता गरेको प्रस्ताव नि:शर्त फिर्ता गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल
युट्युबर विरुद्ध अक्षयकुमारले दर्ता गरे ५०० करोडको मानहानी मुद्दा
गलत सुइ लगाएका कारण छोरी जन्मिएपछि दम्पतीले पाए १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ !
मन्त्री पदभार सम्हालेको साढे २ घण्टामै राजीनामा !
बलात्कारीलाई सार्वजनिक चोकमा झुण्ड्याएर मार्नुपर्छ : इमरान खान